भारतीय राजदूत पुरी र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता, के होला वामएकता ?
काठमाडौं, फागुन १ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जिबसिंह पुरीले भेटवार्ता गरेका छन् । मंगलवार एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भएको भेटमा राजदूत पुरीले सरकार गठनका बारेमा अध्यक्ष ओलीसँग जिज्ञासा राखेका थिए । अध्यक्ष ओलीले सरकार गठनका लागि सकरात्मक दिशामा पहल भईरहेको र चाँडै नै सरकार गठन हुने बताएको भेटमा सहभागी एमाले नेता राजन भट्टराईले जानकारी दिए ।
राजदूत पुरीले अध्यक्ष ओलीलाई शिवरात्री पर्वको शुभकामना पनि दिएका थिए । पुरी र ओलीको भेटलाई कतिपयले गम्भीरताका साथ हेरेका छन् । पुरीसँग ओलीको भेटपछि एमाले–माओवादी एकता प्रक्रिया प्रभाबित हुने त होइन ? भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।
पोखराको बिजयपुरमा टाईम बम विस्फोट
पोखरा । पोखराको बिजयपुर खोलामा टाईम बम विष्फोट हुँदा पत्रकार घनश्याम पाण्डे र प्रहरी कुलबहादुर खत्री घाइते भएका छन् ।
काठमाडौं । विगत ८ वर्षदेखि काठमाडौंको पुतलीसडकमा रहेर बेरोजगारीको समस्याले जरा गाडेको अवस्थामा युवाहरुलाई दक्ष बनाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै आएको एलाइन्स ल्यापटप एण्
काठमाडौं, फागुन ८ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब पाँच वर्षका लागि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुने बताएका छन् । एक कार्यक्रममा सहभागी हुन चितवन पुगेका
महानगरिय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरकाे ढाेकैमा फेला पर्‍यो बम